Kana Gabatee Deetaa yoo taattoon wardii herregduu ykn gabatee barreessitu ti saagamee qaaqan hin mul'atu.
Taattoo hujeeka haaromsuuf yoo gabteen heeregduu jijjiiramee qoofadha
Jijjiiramnii tokko tokko kan mul'atu ergaa qaaqa cuftee deebitee bantee booda.
Mul'isi - Gabatee Deetaa Taattoo (Taattoota) fili
Taattoo deetaa jijjiirufi
Yeemu taattoo deetaa durtii irra ti hundooftee uumtuu, ykn yeemu taattoo galmee kee keessati garagalchiitu, Deetaa kee saaguu fi qaaqa gabatee deetaa bani. Taattoon kan deebi kenu deetaa durargii ammee ti.
Jijjiiramaa hundaa taattoo fayyadamuf qaaqa deetaa taattoo cufi.Fili Gulaali - Gaabbi jijjiiramaa dhiisuuf.
Taattoo issa deetaa man'ee jiraataa irrati hin hundoofnee saagi ykn fili.
Fili Mul'annoo - Gabatee Deetaa Taattoo qaaqa gabatee deetaa banuuf.
Man'ee qaaqa keessa cuqaasi ti qabiyyee issa jijjiirii. Man'een birra keessa cuqaasi jijjiiramaa qabiyyee durargii irrati laali.
Maqaa walfaannee deetaa sanduuqa barruu keessa tarjaan oliiti saagi.
Tarree ykn tarjaa saaguuf ykn haquuf sajoo gabateen oli jiru fayyadami. Walfaannee deetaa tarjaa heedduu fi, walfaannee deetaa guutumma qoofaatu sagama ykn haqamma.
Tartiibni walfaannee deetaa taattoo keessaa gabatee deetaa keessa waliin tokko. kana fayyadamii Walfaannee mirgati siqsi Sajoo issa tarjaa ammee keessaa gara mirga ola'aa issati jijjiiri.
Tartiibni akkakuu ykn tuqaalee deetaa . kana fayyadamii Tarree gadi siqsi Sajoo issa tarree ammee keessaa gara gadi ti ola'aa issati jijjiiri.
Title is: Gabatee Deetaa